दक्ष सेक्युरिटी गार्डलाई रोजगारीको समस्या छैनः आचार्य – Arthik Awaj
दक्ष सेक्युरिटी गार्डलाई रोजगारीको समस्या छैनः आचार्य
By आर्थिक आवाज २०७५ श्रावण ३ गते बिहीबार १२:२० मा प्रकाशित
लामो समयसम्म नेपाल प्रहरीको अफिसर भएर काम गरेका घनश्याम आचार्यले अहिले पोखराको सभागृहचोक स्थित शिवालयमार्गमा सफल टाक्स फोर्स सेक्युरिटी एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रालि सञ्चालन गरिरहेका छन् । जागिरकै क्रममा नेपालमा सिपाहीदेखि अधिकृतसम्मलाई प्रशिक्षण गराएका आचार्यसँग आबुदाबी पुलिसमा काम गरेको अनुभवसमेत छ । सेक्युरिटी व्यवसायमा लाग्नुको कारण, सेक्युरिटी गार्डको आवश्यकता, सफल टाक्स फोर्सका विशेषता लगायत विविध विषयमा केन्द्रिर रहेर प्रवन्ध निर्देशक आचार्यसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीः
सेक्युरिटी व्यवसायमा कहिलेदेखि किन आबद्ध हुनुभयो ?
सेक्युरिटी क्षेत्र मेरो रुचीको विषय हो । सुरुदेखिको अनुभव पनि यही क्षेत्रमा भयो । नेपाल प्रहरीको अफिसर भएर लामो समय काम गरेको अनुभवले पनि यस क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा लाग्न प्रोत्साहन मिल्यो । आबुदाबी पुलिसमा पनि ३ वर्ष काम गरेँ । जागिरे जीवनमा हाइटी मिसनमा गएको अनुभव पनि छ । जागिरकै क्रममा नेपालमा पनि सिपाहीदेखि अधिकृतसम्मलाई प्रशिक्षण गराएको थिएँ । जागिरे जीवनबाट अबकास लिइसकेपछि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । मेरो अनुभवलाई व्यावसायिक रुपमा प्रयोग गर्ने क्रममा सेक्युरिटी व्यवसाय मेरो रोजाईमा प¥यो । फलस्वरुप आजभन्दा ३ वर्ष अगाडि पोखराको सभागृहचोकस्थित शिवालय मार्गमा सफल टाक्स फोर्स सेक्युरिटी एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रालि स्थापना गर्न सफल भएँ ।
सफल टाक्स फोर्स सेक्युरिटी एण्ड ट्रेनिङ सेन्टरले के–कस्ता तालिमहरु सञ्चालन गर्छ ?
देशमा बढ्दै गइरहेको बेरोजगारी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मैले यो व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुँ । हामीले विशेष गरी युवा युवतीहरुलाई सेक्युरिटी सम्बन्धी तालिमहरु प्रदान गर्छौं । हामीले सेक्युरिटी सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकारका कोर्षहरु सिकाउँछौं । सिभिल एक्स आर्मी, इण्डियन आर्मी, आबुदाबी, दुवई, मकाउ, एनएसआई, डिपिएस, पिएसबिडी, रोयलगार्ड, जेलगार्ड, बडीगार्ड, डिभेन्स आर्मी, स्पेसल फोर्स लगायतका कोर्षहरु हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
सेक्युरिटी तालिममा आकर्षण कस्तो छ ?
सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न रुचीहुनेहरु हामी कहाँ आएर तालिम लिनेक्रम बढेको छ । हामी कहाँ आएका सबै प्रशिक्षार्थीलाई हामी दक्ष बनाउँछौं । दक्ष तथा अनुभवी प्रशिक्षकद्वारा प्रशिक्षण प्रदान गरिन्छ । लाहुरे हुनका लागि उमेरको हद हुन्छ । उमेर हद नाघि सकेपछिको विकल्प भनेको सेक्युरिटी गार्ड नै हो । विशेष गरी १८ देखि ३० वर्षसम्मका युवाहरु सेक्युरिटी गार्ड तालिमका लागि हामीकहाँ आउँछन् । देश तथा विदेशमा सेक्युरिटी गार्डको जागिरका लागि राम्रो अवसर मिल्ने भएकाले पनि युवाहरु यसप्रति आकर्षित भएका हुन् । हामीले तालिमसँगै हाम्रै कम्पनीमार्फत शतप्रतिशत रोजगारी ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने भएकाले पनि सफलप्रति आकर्षण बढेको छ ।
घनश्याम आचार्य, प्रवन्ध निर्देशक, सफल टाक्स फोर्स सेक्युरिटी एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रालि
सेक्युरिटी तालिम लिइसकेपछि रोजगारीको अवसर कस्तो छ ?
हामीसँग तालिम लिएका शतप्रतिशत प्रशिक्षार्थीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन हामी सफल छौं । बैंक, सहकारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, होटल तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्र लगायत विभिन्न ठाउँमा सेक्युरिटी गार्ड आवश्यक परिरहन्छ । तालिम लिएर दक्ष बनेका सेक्युरिटी गार्डलाई रोजगारीको कुनै समस्या छैन । रोजगारीको सम्पूर्ण जिम्मा हामीले नै लिन्छौं ।
सफल टाक्स फोर्समा नै किन तालिम लिने ?
सफल टाक्स फोर्स सेक्युरिटी एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रालि छोटो समयमा ब्राण्डका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । एक पटक तालिम लिइसकेको मान्छे यहीँबाट जागिरे जीवन सुरु गर्छ । स्वदेश तथा विदेशमा सेक्युरिटीमा जागिर खानका लागि हामीले दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्छौं । लामो समय यही क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवी प्रशिक्षकबाट प्रशिक्षण प्रदान गरिन्छ । पारिवारिक वातावरणमा प्रशिक्षण दिन्छौं । शुलभ शुल्कमा उच्चस्तरीय कोर्ष सञ्चालन गर्न हामी सफल छौं । सुरक्षासँग सम्बन्धित जागिरका क्रममा देश तथा विदेशमा संगालेको सम्पूर्ण अनुभवलाई मैले यही व्यवसायमा प्रयोग गर्न सफल भएको छु । फरक खालको विशेषताले नै हामीप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढेको मैले अनुभव गरेको छु । सेक्युरिटी तालिमका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण इक्युपमेन्टहरु हामीसँग छन् । हामी डेमोस्टेसनसहित तालिम प्रदान गर्छौं । उचाईं ५ दशमलव ५ फिट भन्दा माथि भएका जोकोही पनि सेक्युरिटीको तालिममा भर्ना हुन सक्छन् ।
सेक्युरिटी सप्लायर्सको काम पनि गरिरहनुभएको छ । सफलका उत्पादनप्रति आकर्षण कस्तो छ ?
हामी कहाँ तालिम लिएका प्रशिक्षार्थीहरु दक्ष तथा अनुभवी हुन्छन् । हामीबाट तालिम लिएका विद्यार्थीको माग पोखरा लगायत देशभर उच्च छ । प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीको स्थायी बसोबासलाई पायक पर्ने गरी जागिर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था, वित्तीय क्षेत्र, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत सबै क्षेत्रमा सफलको लोगो लगाएका सेक्युरिटी गार्ड देख्न सकिन्छ । सफलबाट उत्पादन भएका सेक्युरिटी गार्डसँग सेक्युरिटीमा आवश्यक सम्पूर्ण ज्ञान सिकेका हुन्छन् । बडी सर्च, फायर फाइटिङ, सिसी टिभी, एक्सिस कन्ट्रोल लगायतका कोर्षमा पनि दक्ष बनाउँछौं । इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने भएकाले पनि हामीप्रति सबैको विश्वास बढेको छ । एक पटक हामीबाट सेवा लिइसकेपछि पुनः हामीलाई नै अबसर दिने क्रम बढिरहेको छ ।
पूर्व प्रहरी तथा आर्मीहरु सेक्युरिटीमा आउने क्रम कस्तो छ ?
१८ वर्षमा भर्ती भएको एउटा युवा १७ वर्ष जागिर खाँदा ३५ वर्षमा रिटायर्ड हुन्छ । जम्मा ३५ वर्षको युवालाई घरमा त्यसै बस्न मन मान्दैन । राम्रो अवसरको खोजी गर्ने क्रममा उसको पहिलो रोजाई सेक्युरिटी गार्ड बन्छ । उसले राम्रो अवसरका लागि बढी मात्रा विदेश नै ताकेको हामीले पाउँछौं । यसरी सेना तथा प्रहरीमा काम गरेका व्यक्तिहरु विदेश जानका लागि थप तालिमको आवश्यकता पर्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई हामीले सेक्युरिटीका लागि विशेष कोर्ष सञ्चालन गरिरहेका छौं । उनीहरुका लागि विशेष गरी बर्डी गार्ड, डिफेन्स आर्मी, रोयल गार्ड, जेल गार्ड, स्पेसल फोर्स तालिम आवश्यक पर्छ । त्यो अनुभव मसँग प्रशस्त छ, जुन ज्ञान यहाँ आएका प्रशिक्षार्थीलाई सिकाइरहेको छु । रिटायर्ड भइसकेकाहरु सफलमा आएर आवश्यक तालिम लिने क्रम बढिरहेको छ । मैले सिकाएका प्रशिक्षार्थीहरु शतप्रतिशत सफल भएको अनुभव गरेको छु ।
सुरक्षाका लागि सेक्युुरिटी गार्डको महत्व कस्तो छ ?
पोखरा पर्यटकीय नगरी हो । यहाँ प्रशस्त पर्यटनस्तरका होटलहरु छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या पनि प्रशस्त छ । सबै क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सेक्युरिटी गार्ड खटिएको हामीले देखिरहेका छौं । निजी तथा सरकारी सबै क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सेक्युरिटी गार्ड आवश्यक पर्छ । मेला, महोत्सव, सभा सम्मेलन तथा अन्य गतिविधिमा पनि सेक्युरिटी गार्डको आवश्यकता पर्छ । तालिम प्राप्त तथा दक्ष सेक्युरिटी गार्डले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नेगर्छन् । सम्पत्ती तथा मानवीय सुरक्षाका लागि सेक्युरिटी गार्ड खम्बा बनेर बसेको हामी पाउँछौं । सेक्युरिटी गार्डको आवश्यक नभएको सम्भबत कुनै पनि क्षेत्र छैन भन्दा हुन्छ । सफलबाट प्रशिक्षित विद्यार्थीमा सेक्युरिटी गार्डमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण ज्ञान हुन्छ । अनुशासनलाई पनि हामीले कडाई गर्छौं ।